October 2021 – Cele News TV
ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ
ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ The post ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဒဏ္ဍာရီထဲက မင်းသမီးလေး တစ်ယောက် အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အမိုက်စား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်
ဒဏ္ဍာရီထဲက မင်းသမီးလေး တစ်ယောက် အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အမိုက်စား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ သန္တာဗိုလ် The post ဒဏ္ဍာရီထဲက မင်းသမီးလေး တစ်ယောက် အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အမိုက်စား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ သန္တာဗိုလ် appeared first on Celebrity Corner. […]
UK ရဲ့ ‘Official Chart’မှ [ ၄ ] ပတျဆကျတိုကျ စာရငျးဝငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး K-pop အဆိုတျော Lisa
UK ရဲ့ ‘Official Chart’မှာ ‌ ၄ ပတျဆကျတိုကျစာရငျးဝငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး K-pop အဆိုတျောဖွဈလာသူ Lisa BLACKPINK ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျဖွဈသူ Lisa ဟာ UK ရဲ့ ‘Official Chart’မှာ ၄ ပတျဆကျတိုကျစာရငျးဝငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး […]
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ပိုမိုရရှိလာတဲ့ ကြျောကြျောနန်ဒကတော့ (၅၀၅ က)ဖွငျ့ အမှုပွနျလညျရုတျသိမျးခံလိုကျရတဲ့အခြိနျကတညျးက အေးခမျြးတညျငွိမျစှာ ခကျခဲတဲ့ အခွအေနတှေကေနေ ဘဝကို အကောငျးဆုံး လြှောကျ လှမျးနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ကြျောကြျောနန်ဒဟာ နှဥေီးတျောလှနျရေးလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျပေးခဲ့ပွီး တကျတကျကွှကွှ လုပျဆောငျပေးရငျး (၅၀၅ က)ဖွငျ့ […]
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးမွတျဖွိုးသငျးက ဇာတျကားတှရေိုကျကူးခဲ့သလို တေးသီခငျြးတှလေညျး သီဆိုပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို နှဈအတျောကွာအောငျ လုပျကိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှကေလညျး သူမကို ခဈြကွလို့ ယနအေ့ထိ အားပေးခဈြခငျနကွေဆဲပါ ။ လတျတလောမှာတော့ ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုးကွီးနဲ့ ရုတျတရကျ ခှဲခှာသှားတဲ့ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းရတုပိုင်ကတော့မမက မောင်ခေါ်ရာလိုက်မှာလား သီချင်းနဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Music Video အသစ်တွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက တခဲနက်အားပေးဝန်းရံခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးပရိသတ်ေ တွအသည်းစွဲ ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးလို့လည်းဆိုရမှာပါ။ မင်းရတုပိုင်ကတော့ မကြာသေးခင်ကလည်း မိခင်ကိုဆုံးရှူံးခဲ့ရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မိဘနှစ်ပါးထဲကကျန်ရစ်ခဲ့သူ ဖခင်ကြီးအပေါ်မှာ […]
ကိုယျဝနျဆောငျနေ တဲ့ ဓာတျပုံတှေ ကို အမွဲတငျနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျး ကို ထုတျပွလိုကျတဲ့ နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျ သရုပျဆောငျ နှိုငျးရှ ငျမွငျ့မိုရျ ကတော့ဇာတျ ကားတှမှော ပါဝငျသရုပျ ဆောငျရငျး သရုပျဆောငျကော ငျးတာကွောငျ့ ပရိတျသ တျတှရေဲ့အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထား တာပဲဖွဈပါတယျ။ နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျ ကတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှထေဲမှာ […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို အမြဲတင်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို အမြဲတင်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် The post ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို အမြဲတင်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် appeared first on Celebrity Corner. […]
ထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ဖက်လူတွေအတွက် ရေးသားလာတဲ့ ဒေါင်းရဲ့စာတစ်စောင်
ထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ဖက်လူတွေအတွက် ရေးသားလာတဲ့ ဒေါင်းရဲ့စာတစ်စောင် The post ထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ဖက်လူတွေအတွက် ရေးသားလာတဲ့ ဒေါင်းရဲ့စာတစ်စောင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဖက်ရှင် အလန်းလေးကို ဝတ်ဆင်ကာ စွဲမက်စရာ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ပုံရိပ်လးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့ စူးရှထက် The post ဖက်ရှင် အလန်းလေးကို ဝတ်ဆင်ကာ စွဲမက်စရာ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ပုံရိပ်လးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့ စူးရှထက် appeared first on Celebrity Corner. […]